परमेश्‍वरको राज्यको प्रचार—संसारभरि सुसमाचार प्रचार गर्ने | परमेश्‍वरको राज्य
बायाँ: कोरियामा प्रचार गरिरहेकी कल्पोर्टर (अग्रगामी) बहिनी, १९३१; दायाँ: हाल कोरियामा साङ्‌केतिक भाषामा प्रचार गर्दै
परमेश्‍वरको राज्यको प्रचार—संसारभरि सुसमाचार प्रचार गर्ने
बिदाको दिन। तपाईं बिहान सबेरै प्रचार जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईंलाई अलि थकाइ लागेको छ, प्रचारमा नजाऊँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। तपाईंलाई आराम गर्ने मन छ। तर तपाईं यसबारे प्रार्थना गर्नुहुन्छ र प्रचारमा जाने सुरसार कस्नुहुन्छ। तपाईं उमेर ढल्किसकेको वफादार बहिनीसित प्रचारमा सँगै जानुहुन्छ। ती बहिनीको धीरज र दयाले तपाईंको मन छुन्छ। विश्‍वभरिका भाइबहिनीले तपाईंले जस्तै घर-घरमा यही सन्देश सुनाउँदैछन्‌, यही प्रकाशन चलाउँदैछन्‌ अनि सबैले एउटै प्रशिक्षण पाएका छन्‌ भनेर सोच्दा तपाईंको मन खुसीले ढक्क फुल्छ। प्रचारबाट घर फर्कंदा तपाईं फुर्तिलो महसुस गर्नुहुन्छ। थकाइ लागे पनि प्रचार जाने आफ्नो निर्णय सम्झेर तपाईं खुसी हुनुहुन्छ!
अहिले परमेश्‍वरको राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रचारकार्य हो। अन्तको दिनमा पृथ्वीको चारै कुनामा प्रचार हुनेछ भनेर येशूले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। (मत्ती २४:१४) यो भविष्यवाणी कसरी पूरा भएको छ? यहोवाका साक्षीहरूको प्रचारकार्यले गर्दा लाखौं मानिसले परमेश्‍वरको राज्य वास्तविक हो भनेर थाह पाएका छन्‌। यस प्रचारकार्यमा कस्ता मानिसहरू, तरिकाहरू र साधनहरूले सघाउ पुऱ्‍याएका थिए, त्यसबारे हामी यस भागमा छलफल गर्नेछौं।
यस अन्तको दिनमा राजीखुसी प्रचार गर्ने मानिसहरूको दल हुनेछ भनेर येशू किन विश्‍वस्त हुनुहुन्थ्यो? परमेश्‍वरको राज्यलाई तपाईं कसरी पहिलो स्थान दिन सक्नुहुन्छ?
अन्त आउनुअघि सकेसम्म धेरैलाई सुसमाचार प्रचार गर्न परमेश्‍वरका जनहरूले प्रयोग गरेका नयाँ-नयाँ तरिकाबारे बुझ्नुहोस्‌।
हामीसित येशूको समर्थन छ भनेर अनुवादको कामले कसरी देखाउँछ? हाम्रा प्रकाशनसम्बन्धी कस्ता तथ्यहरूले तपाईंलाई राज्य वास्तविक हो भनेर विश्‍वस्त बनाउँछ?
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई ठूलो कटनीको कामसम्बन्धी दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउनुभयो। यी कुरा हाम्रो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ?